I-Thunderbird, umphathi weposi omtsha ku-Kubuntu 20.04 | Ubunlog
Ummangaliso. Okanye yile nto bendiyiva xa ndifunda into ekuthiwa incinci kakhulu: I-KDE igqibe ukusebenzisa I-Thunderbird kwi-Kubuntu 20.04 I-LTS Focal Fossa, umphathi weposi odumileyo weMozilla othatha indawo ye-KMail yeprojekthi "K". Kuyamangalisa kuba abathethi malunga nokuba loluphi olu tshintsho, oluyinyani, olunzulu ngakumbi. Kwaye kwamangaliswa kuba iThunderbird yavela (yayisele ifakiwe, kodwa ndiyifumene namhlanje) kwiKickoff yam ngengozi phantse iiveki ezimbini emva kokukhutshwa kwenguqulelo yamva nje yeKubuntu.
Kwaye yile, njengomncedisi ubhale kwihlobo ephelileyo, ibilutshintsho olucetyiswayo. KMail inezinto ezithile ezilungileyo, kodwa ezinye izinto ezimbi ngokwenene njengenkqubo yokongeza iiakhawunti ze-imeyile ezijongeka ngakumbi njengesoftware eneminyaka eli-15 kunale yanamhlanje. Ngapha koko, yinto endikhankanyileyo kubaphuhlisi bayo kwaye baqonda ukuba kuninzi ekufuneka bephucule. Basebenza kuyo, kodwa kubonakala ngathi lelona nyathelo lilungileyo langoku yayikukuthatha utshintsho olukhulu olungazange luhlale kumphathi wakho weposi.
1 I-Thunderbird ithathe indawo ye-KMail kwaye zonke ezinye izicelo ze-PIM ziyanyamalala
2 Kude kube nini okanye kude kube kamva?
I-Thunderbird ithathe indawo ye-KMail kwaye zonke ezinye izicelo ze-PIM ziyanyamalala
Xa sipapasha Inqaku lethu malunga Kubuntu 20.04, siyalibala malunga nale nkcukacha ebonakala kwifayile ye- iwebhusayithi esemthethweni. Kodwa iqela leKubuntu likhankanye kuphela ukuba «I-Thunderbird ngoku ngumxhasi weposi obonelelwe kufakelo olungagqibekanga, endaweni ye-KMail«. Eli nqaku liyinyani, kodwa sisiqingatha sinyani kuba Zonke izicelo zanyamalala de I-KDE PIM, zezi:
Ukudibanisa: uluhlu lolawulo lolwazi lomntu.
Isihlanganisi: iindaba zokutya app.
Ibhlogilo: umxhasi webhlog.
IINKCUKACHA: umphathi wedilesi.
KMail: umphathi wemeyile.
KNotes: amanqaku anamathelayo.
KOrganizer: isiqu sakho.
KonsoleKhalendaikhalenda yomgca wokuyalela:
KJots: isixhobo sokuthatha amanqaku.
Kude kube nini okanye kude kube kamva?
I-KDE ayipapashanga, okanye ubuncinci andiyifundanga, ulwazi oluninzi malunga nolu tshintsho. I-Kubuntu ibandakanya isoftware eninzi emva kokwenza ukucoceka okucocekileyo kwaye esinye sezizathu abanokuthi bathathe isigqibo sokususa i-PIM yabo Faka i-bloatware encinci kwi inkqubo yakho yokusebenza. I-KDE iyaqhubeka nokusebenza kuseto lwe-PIM, njengoko kubonisiwe kuyo Oku kubhaliwe Ikhutshwe kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, kodwa kubonakala ngathi bakhethe ukuvumela uKubuntu ukuba abe lula ukusuka ekuqaleni, ubuncinci okwangoku. Ukuba bathatha isigqibo sokubuyela umva kwaye bongeze zonke ezi zicelo kwiinguqulelo ezizayo yinto enokuthi ivezwe lixesha kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Akukho nto ingako ithethwayo malunga noku: Ngaba i-KDE iyekile kwi-KMail yayo? I-Kubuntu 20.04 ihambela kwiThunderbird
Ndifundile ndaweni ithile ukuba bekufanele ukuba inento yokwenza nale bug (isonjululwe namhlanje):
isithi "uGoogle uvumile ukufikelela kwi-KMail kwi-Gmail ngokungena ngoGoogle namhlanje".
Umbhali uyafana no https://www.dvratil.cz/2020/05/march-and-april-in-kde-pim/